Fizahan-tany any Bruxelles: làlana kanto an-dalambe momba an'i Bruegel
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Fizahan-tany any Bruxelles: làlana kanto an-dalambe momba an'i Bruegel
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
visit.brussels, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Brussels miaraka amin'ny Farm Prod dia niasa tamin'ny lalan'ny kanto an-dalambe mba hanomezam-boninahitra an'i Pieter Bruegel, tompondakan'i Flemish, eo afovoan'ny renivohitra Beriziky. Ny mpitsidika dia ho afaka mahita ny sanganasa voalohany nataon'i Lazoo mpanakanto frantsay ao amin'ny Marolles mpifanolo-bodirindrina aminy, raha toa kosa ka vita amin'ny paozy iray hafa ny Rue Baron Horta.
Brussels sy Bruegel dia mifamatotra tsy azo ihodivirana. Nandany ny androm-piainany tany Bruxelles ilay mpanakanto, ary milevina koa izy. Brussels dia loharanom-tsindrimandry lehibe ho an'i Bruegel, raha ny tena izy dia kambana roa ambin'ny folo amin'ny sanganasany no voatonona eto. Nipetraka tao Mont des Arts, izay mandeha an-tongotra kely avy any an-tranony ireo mpiaro azy manana ny lanjany. Androany, misy ampahany lehibe amin'ny asan'i Bruegel. Taorian'ny tranombakoka Kunsthistorisches any Vienna, ny Royal Museums of Fine Arts any Belzika dia manana ny tahiry be indrindra amin'ny sary hosodoko Bruegel ary ny Tranombokim-panjakana dia tsy nisy latsaky ny sokitra 90.
I Bruxelles dia tsy maintsy nanokana hetsika maromaro tamin'ity mpanakanto malaza eran-tany ity hanamarihana ny faha-450 taonan'ny fahafatesany. visit.brussels, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Farm Prod, dia nanome voninahitra an'i Pieter Bruegel ihany koa tamin'ny alàlan'ny famolavolana lalam-kanton'ny arabe eny afovoan-tanàna. Ny làlana dia miditra amin'ny andrim-panjakana, mandalo toerana misy fifandraisana Bruegel malaza (rohy manan-tantara sy fanangonana maharitra, sns.).
Ny fahitana voalohany ny asa amin'ity zotra ity dia efa hita eny amin'ny Rue Haute, akaikin'ny Porte de Halle. Sanganasan'ny artista frantsay Lazoo, aingam-panahy avy amin'ny "The Dance Dance". Asa goavana iray hafa no eo an-dàlana ankehitriny, manakaiky ny BOZAR ao amin'ny Rue Baron Horta.
Manomboka amin'ny tapaky ny volana jona ho avy izao, fresco iraika ambin'ny folo, farafaharatsiny, nolokoina ihany koa ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny fiaraha-mientana miaraka amin'ireo mpanakanto malaza nasaina, no ho talanjona amin'ny lalana rehetra. Fahafahana lehibe hahita an'i Bruegel amin'ny hazavana hafa.